Nlekọta PRL-8-53 Hype nke PRL-8-53 dị ka ọgwụ na-emetụta mmụọ metụtara azụ n'oge 1970s. Nikolaus Hansl, prọfesọ na Mahadum Creighton, chọpụtara na ọ bụ nootropic ka ọ na-arụ ọrụ na aminoethyl meta benzoic acid esters. Kemgbe ọ malitere, mgbakwunye a agbanweela otu usoro mmụta doro anya na nnwale mmadụ. Nchọpụta ahụike bụ ihe kachasị egosi na PRL-8-53 maka ịmụ ihe na-eme ka ncheta oge dị mkpirikpi na ...
Gịnị bụ Oxiracetam? Oxiracetam bụ otu n'ime ihe mgbakwunye nootropic ochie sitere na ezinụlọ racetam. Ọ bụ nke atọ racetam compound mgbe piracetam na aniracetam na mbụ e mepụtara na 1970s. Oxiracetam bụ kemịkalụ kemịkalụ nke racetam mbụ, piracetam. Dị ka racetams ndị ọzọ, oxiracetam nwere pyrrolidone na isi ya. Agbanyeghị, oxiracetam nwere otu hydroxyl, nke kpatara ya ji nwee ike karịa ngalaba nne na nna ya, ...
Kedu ihe bụ 9-ME-BC? 9-Me-BC (9-Methyl-β-carboline) nke a makwaara dị ka 9-MBC bụ akwụkwọ nootropic akwụkwọ sitere na otu β-carboline. Β-Carbolines sitere na ezinụlọ carboline dị iche iche. Nke a pụtara na a na-emepụta ha ma arụ ọrụ na ahụ mmadụ yana kwa mkpụrụ osisi ụfọdụ, anụ esiri esi, anwụrụ ụtaba na kọfị. Achọpụtara β-Carbolines (BCs) dị ka neurotoxic, agbanyeghị, ọ chọpụtara n'oge na-adịbeghị anya na 9-Me-Bc bụ ...
Kedu ihe kpatara anyị ji chọọ Magnesium? Tupu anyị enwee ike ịbanye n’ime mgbakwunye magnesium L-Threonate nootropic, ị nwere ike ịchọ ịghọta gbasara onye bu ya ụzọ. Magnesium bụ micronutrient dị ịrịba ama, nke na-arụsi ọrụ ike n'ọtụtụ usoro anụ ahụ. Ihe mmewere nwere njigide na ike mgbochi na izu ike, njikọ protein, yana ọrụ neuronal. E wezụga nke ahụ, ọ na-edozi shuga dị n'ọbara ma na-ekwusi ọbara mgbali elu. Agbanyeghi na inwere ike ...
Gini mere eji mara J-147 dị ka ọgwụ kachasị mma maka ịgwọ ọrịa Alzheimer na ịka nká?
Nyocha J-147 J-147 dị na 2011 na Cellular Neurobiology Laboratory nke Salk Institute. Kemgbe ọ malitere, enwere ọtụtụ ọmụmụ nke gosipụtara arụmọrụ ya n'ịgwọ ọrịa Alzheimer na ịgbanwe usoro ịka nká. Dọkịnta Dave Schubert ya na ndị nyocha ibe ya nọ na Salk Institute rụrụ oke ọrụ n’ọmụmụ J-147 curcumin. Na 2018, ndị na-agwọ ọrịa ahụ kpughere J-147 ...
Nchịkọta Coluracetam Coluracetam akụkọ ihe mere eme Coluracetam makwaara dị ka BCI-540 ma ọ bụ 2- (2-oxopyrrolidin-1-yl) -N- (2, 3-dimethyl-5, 6, 7, 8-tetrahydrofuro2, 3-b quinolin-4- yl) acetoamide na-akpọbu MKC-231. Coluracetam bụ nootropic sịntetik ọhụrụ sitere na ezinụlọ racetam n'agbanyeghị, ọ bụ nnukwu nootropic na-eme ka ncheta na mmụba zuru oke na-arụ ọrụ. Coluracetam bu nnoo, mmeju nri nke enwetara site na piracetam ....